Igadi engcwele eFremantle - I-Airbnb
Igadi engcwele eFremantle
**Kufanelekile ukuba ube wedwa**
Intle igumbi elinye lokulala studio elingaphantsi kwe-1km ukusuka eFremantle. Yakhiwa ngo-1900 esi studio esisezantsi sijonge kwigadi enamagqabi enedama elizolileyo. Ukuhamba kunye / okanye ukukhwela umgama ukuya eFremantle (iibhayisekile ezinikezelweyo) apho kukho ukhetho olungapheliyo lokutya, umculo kunye nobugcisa. I-Monument Hill yindlela emfutshane yokunyuka esitratweni, ibonelela ngembono yepanoramic yolwandle kunye nendawo entle yokonwabela ukutshona kwelanga. Qaphela: Isitudiyo sahlukile kwindlu enokufikelela ngasese.
Ifumaneka kumgangatho ophantsi kwaye inqunyulwe kwi-limestone, i-studio inenkangeleko ekhethekileyo kunye nemvakalelo. Ibhedi ekhululekileyo ephindwe kabini, enamaphepha angama-1000 wokubala kunye nentaphane yemiqamelo. Ikhitshi elahlukileyo elinesitovu phezulu, imicrowave kunye nazo zonke izinto zokupheka. Uluhlu lwezinto ezidliwayo zesidlo sakusasa zibonelelwa kwiindwendwe ekufikeni kwazo kubandakanya: ukhetho lweeti, ikofu, ubisi, i-muesli, isonka, i-jam, ubusi kunye ne-vegemite. Kukho indawo yokuhlamba impahla ekwabelwana ngayo ngaphandle. Indawo yokupaka ngaphandle kwendlela iyafumaneka.
Kwiindwendwe ezihlala ixesha elide, ukucoca kunye nelinen utshintsho lunikezelwa emva kweentsuku ezi-7.
Ndihlala phezulu kwaye njengoko iyindlu yelifa lemveli ndicela ulindele ukuva ingxolo (izingqi). Nangona kunjalo, ndibakho ngamaxesha athile kuphela njengoko ndisebenza ngokusisigxina kwaye ngeempelaveki ndiqhele ukuba selwandle!
Uhlaziyo lwentsholongwane yeCorona: Istudiyo sahlukile kwindlu, kukho indlela yokungena yabucala kwaye iindwendwe zisetyenziselwa igadi kuphela. Isitudiyo sicocwa phakathi kweendwendwe kwaye yonke imiphezulu yosulwa ngesibulali ntsholongwane.
I-Fremantle yidolophu yasechwebeni enembali, enenkcubeko edlamkileyo kunye nelifa lemveli. I-Lonely Planet ichaza i-Fremantle "njengengqondo yokudala, ekhululekile kwaye evulelekileyo" kwaye yanikezela isixeko njengenye yeendawo eziphezulu ze-10 kwihlabathi ukutyelela ngo-2016. iigalari kunye nemarike enkulu. UMlambo i-Swan kunye neelwandle ezininzi ezintle zilungile emnyango.
Ndihlala phezulu, nceda uqhagamshelane nam ngefowuni kuqala kunokuba uhambe ngokuthe ngqo phezulu xa kukho into oyifunayo.